Ilitye le-opal epinki linokuseta njengamakhonkco, isacholo somqala, amacici, isongo-ividiyo
Senza ubucwebe besiko ngamatye e-opal epinki njengamakhonkco, amacici, isacholo somqala, isongo okanye isangqa. I-opal epinki ihlala isetwa kwi-rose yegolide njengeeringi zokuzibandakanya.
Thenga i-opal yendalo kwivenkile yethu
Eli litye linqabileyo lifumaneka kuphela kwiiNtaba zeAndes zasePeru. Ngapha koko, zithathwa njengesipho esivela kuPachamama, isithixokazi sokuqala seInca sokuchuma kunye noMama woMhlaba. Ilitye lejeli ye-silica eyomeleleyo, ihlala ine-5 ukuya kwi-10% yamanzi. Ke ngoko ayi-nonstrystalline, ngokungafaniyo namanye amatye anqabileyo.
Ifomula: SiO2 • n (H2O)
Ubungakanani obuthile: 2.10 g / cc
Umxholo wamanzi: 3.20%
Isikali sikaMoh 5.5-6
I-opal epinki evela ePeru
Imiba yobuninzi be-opal yasePeru
Ngokutsho iintsomi amatye Peruvian Ilitye Sililitye kukupholisa ukuba iyamcamagusha ingqondo kucuthwe imiba ubuthongo. Sleeping nge yihakinto Peruvian kukholelwa ukuba ukunyanga iintlungu ienjini kwiindlela yakho.
Ilitye linamandla okuphumla, isiko lisixelela ukuba linokususa nakuphi na ukungavisisani kunxibelelwano kwaye liya kuvumela izimvo ukuba zihambe ngokukhululekileyo. Lilitye elincomekayo lokuthomalalisa ingqondo kwaye liqwalaselwe ukuba liluncedo kubusuku obuhle bokulala.
Eli litye linxibelelana nentliziyo ye-chakra, amandla asembindini ngenkxalabo kunye nonxibelelwano. Kuthiwa yeyona nto inamandla kuwo onke amatye okuphilisa. Inokonyusa ubuchule kunye nenkuthazo, ilitye linxulunyaniswa nethamsanqa.
Intsingiselo yelitye kukuphilisa ngokwasemoyeni. Igcinwe njengelitye eliyigugu lokuphilisa. Kuthiwa ukukhulula uxinzelelo nokuzisa uxolo. Kuyacetyiswa kubantu abaqhele ukuba noxinzelelo kunye namaxhala. Inokukhulula naziphi na iintlobo zoxinzelelo.
Isampulu phantsi kwemicroscope
Inqabile kangakanani i-opal epink?
Eli litye linqabile kwaye lifumaneka kwiindawo ezimbalwa eMhlabeni. Amatye ayipinki emhlophe xa embiwa.
Usebenzisa njani i-opal pink?
Ngokomoya kuzisa uxolo kunye nokukhulula entliziyweni yomntu, kuvumela umntu ukuba akhuphe uxinzelelo lwangaphambili, uxinzelelo kunye noxinzelelo. Ingasetyenziselwa ukugcina unxibelelwano lomntu kwiindawo zeengelosi zivulekile kwaye zicacile. Ngokweemvakalelo ilitye linokunceda abo banoloyiko olugqithisileyo, unxunguphalo okanye uxinzelelo.
Ungayifaka i-opal epinki emanzini?
Ilitye elinqabileyo liyabonakala ukuba uligcina kwindawo eyomileyo. Ngokwendalo inamanzi kwaye ingena ngaphakathi. Ungayifaka emanzini okanye kwikotoni emanzi ukuyigcina iminyaka.
Ngaba i-opal epinki ixabisekile?
Iimpawu ezintle zekhwalithi zinokuba zintle ngokumangalisayo kwaye zinokulanda amaxabiso ukuya kuthi ga kwi-100 yeedola zaseMelika kwi-carat nganye. Ezi zinto zininzi kubandakanya umbala, ukucaca, ukusika kunye nobunzima bekharati obumisela ixabiso lilonke.
Ungazi njani ukuba i-opal epinki iyinyani?
Uninzi lwee-opal zokwenyani zinokungahambelani ngombala, okanye imilo egobileyo okanye enamaqhuma ngenxa yokwakheka kwendalo ngelixa ilitye elenziwe ngumntu liza kujongeka lilungile.
Thenga i-opal yendalo kwipinki yethu
Senza ubucwebe besiko ngamatye e-opal epinki njengamakhonkco, isacholo somqala, amacici, isongo okanye isangqa. I-opal epinki ihlala isetwa kwi-rose yegolide njengeeringi zokuzibandakanya.
tags umlilo, I-opal yomlilo, yihakinto
tags ICantera, yihakinto
tags -qakathisa, Koroit, yihakinto
20% Isaphulelo kwilitye lenyanga.
* Iya kufumaneka de kube ngu-Epreli 30, 2021